“နိုင်ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတိုကို ဆေးရုံးအရေးပေါ် ခန်းထဲရောက်ပြီး သုံးရက်အကြာမှာ ခက်ခဲစွာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – CHAR TAKE
“နိုင်ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတိုကို ဆေးရုံးအရေးပေါ် ခန်းထဲရောက်ပြီး သုံးရက်အကြာမှာ ခက်ခဲစွာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
30/05/2022CHAR TAKE 10 Comments
နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ လူလေးလှသလို စိတ်ထားအရာမှာလည်း ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေများစွာ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ဒီတစ်ခါမှာလည်း ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ တော်လှန်ရေးရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုက သူမရဲ့ခင်ပွန်း ဒါရိုက်တာ ဏကြီး ရိုက်ကူးတဲ့ “ နိုင် ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတိုမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုဇာတ်လမ်းတိုရိုက်ကူးမှုနဲ့ အမှတ်တရတွေကို အခုလိုမျိုးပဲ ပြောလာပါတယ်။
” “ နိုင်ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ် ပုံရိပ်များ….. ဒီဇာတ်ကားလေးရိုက်ဖို့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကို ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေများအကူအညီနဲ့ ဖြတ်ကျော်ပြီး ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်…. Emergency room ထဲရောက်သွားပြီး ၃ရက်အကြာမှ ာရိုက်ထားတာဆိုတော့ထိုးဆေးစားဆေးတွေအရှိန်နဲ့ဖောရောင်ဖောင်းကားနေတာလေးတော့သည်းခံကြည့်ပေးကြပါ။
📸 – Daniel Aung VPN ချိတ်ပါ Youtubeဖွင့်ပါ *”နိုင်ငံပျောက်သူ”လို့ရိုက် ရှာပြီးကြည့်ပါ ကြော်ငြာတက်လာရင်”Skip ad”နှိပ်ကျော်ပြီးဆက်ကြည့်‌ပေးပါ❤️” ဆိုပြီး “ နိုင်ငံပျောက်သူ” ရိုက်ကူးစဉ်က အမှတ်တရတွေကို အခုလိုမျိုးပဲ ပြောလာပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့တကွ ပိုင်ဖြိုးသု၊ ဒေါင်း တို့ကတော့ သူမ တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာလေးမှာ ကြိုးစားပြီး ပြည်သူတွေ အတွက် ဇာတ်လမ်းတိုေ လးတစ်ခု ရိုက်ကူးတင်ဆက် ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း “နိုင်ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတိုလေးကို ကြည့်ရှုအားပေးပေးကြပါဦးနော်။ Crd
Zawgyi … “နိုင္ငံေပ်ာက္သူ” ဇာတ္လမ္းတိုကို ေဆးရံုးအေရးေပၚ ခန္းထဲေရာက္ၿပီး သံုးရက္အၾကာမွာ ခက္ခဲစြာနဲ႕႐ိုက္ကူးခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသု
ႏိုင္ငံေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ၿဖိဳးသုကေတာ့ လူေလးလွသလို စိတ္ထားအရာမွာလည္း ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ေတြမ်ားစြာ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုဟာ ဒီတစ္ခါမွာလည္း ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး႐ုပ္ရွင္တစ္ခုမွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပိုင္ၿဖိဳးသုက သူမရဲ႕ခင္ပြန္း ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီး ႐ိုက္ကူးတဲ့ “ ႏိုင္ ငံေပ်ာက္သူ” ဇာတ္လမ္းတိုမွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ထိုဇာတ္လမ္းတို႐ိုက္ကူးမႈနဲ႔ အမွတ္တရေတြကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ေျပာလာပါတယ္။
” “ ႏိုင္ငံေပ်ာက္သူ” ဇာတ္လမ္းတို ႐ိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ ပုံရိပ္မ်ား….. ဒီဇာတ္ကားေလး႐ိုက္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးကို ခ်စ္ခင္ရတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအကူအညီနဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ႀကိဳးစား႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္…. Emergency room ထဲေရာက္သြားၿပီး ၃ရက္အၾကာမွ ာ႐ိုက္ထားတာဆိုေတာ့ထိုးေဆးစားေဆးေတြအရွိန္နဲ႔ေဖာေရာင္ေဖာင္းကားေနတာေလးေတာ့သည္းခံၾကည့္ေပးၾကပါ။
📸 – Daniel Aung VPN ခ်ိတ္ပါ Youtubeဖြင့္ပါ *”ႏိုင္ငံေပ်ာက္သူ”လို႔႐ိုက္ ရွာၿပီးၾကည့္ပါ ေၾကာ္ျငာတက္လာရင္”Skip ad”ႏွိပ္ေက်ာ္ၿပီးဆက္ၾကည့္‌ေပးပါ❤️” ဆိုၿပီး “ ႏိုင္ငံေပ်ာက္သူ” ႐ိုက္ကူးစဥ္က အမွတ္တရေတြကို အခုလိုမ်ိဳးပဲ ေျပာလာပါတယ္။
ဒါ႐ိုက္တာ ဏႀကီးနဲ႔တကြ ပိုင္ၿဖိဳးသု၊ ေဒါင္း တို႔ကေတာ့ သူမ တို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာေလးမွာ ႀကိဳးစားၿပီး ျပည္သူေတြ အတြက္ ဇာတ္လမ္းတိုေ လးတစ္ခု ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း “ႏိုင္ငံေပ်ာက္သူ” ဇာတ္လမ္းတိုေလးကို ႀကည့္ရႈအားေပးေပးၾကပါဦးေနာ္။ Crd
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့အထိသွားပြီ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေရတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီး ချိုပြုံး
သာယာအေးချမ်းပြီး နေချင်စဖွယ်ကောင်းသောလည်း သက် ကြီးရွယ်အိုနှင့်အရုပ်များစွာသာ ပြည့်နှက်နေသော အထီးကျန်ကျေးရွာလေး
ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကို ပေါ်လွင်အောင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီဆရာရဲ့ အသက်ဝင်လွန်းလှတဲ့ ပန်းချီလက်ရာများ
ပကာသနတွေမပါပဲ သိန်းတစ်သောင်းကျော်ကို သာသနာပြုဖို့အတွက် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အလှူရှင်မိသားစု